Ayikho owesifazane ngeke akwenze ngaphandle ezifana Imfanelo ebaluleke kulelikhaya, ayina ebhodi. Ngenxa wakhe, siyakwazi amahembe kahle ironed, ibhulukwe, sigqoka futhi nezinye izingubo zakhe zihlanzeke futhi icocekile. Qualitative ayina ibhodi - nokuthi kudingeka ukhethe ukuthi iliphi imodeli kuze kuqala ezihlukahlukene zanamuhla elikhulu ezinhlobo kanye onobuhle imikhiqizo? Manje sizokutshela izimfihlo wokukhetha, ngenxa siyokwazi ukuthi angene esitolo, ehlome ngolwazi Ukucaciswa eziyisisekelo.
Ngaphambi kwesikhathi ngokushesha noma yilowo nalowo owesifazane osuke kuphakamisa umbuzo obalulekile, nendlela yokukhetha ibhodi ayina esifanelana kangcono izidingo ezingokomoya zomkhaya wakhe? Ukuze siphendule lo mbuzo, kufanele wazi, okokuqala kunakho konke, okufanele zifinyelelwe enjalo amabhodi izimfuno ezingemukeleki.
Ngakho kuqala kukho konke, kufanele wazi ukuthi kusukela ibhodi ayina kuncike:
- ikhwalithi ayina;
- ijubane futhi adambise ngawo ukubhekana nezindawo okunzima kakhulu izingubo zakho (collar, imikhono);
- malula futsi kalula ukuqaliswa inqubo.
Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla ngoba impendulo abanekhono yombuzo nendlela yokukhetha ibhodi ayina, uqaphele nemingcele ezilandelayo umkhiqizo:
1. Easy. Ayina ibhodi kufanele kube lula, futhi uma kunesidingo kufanele ukwazi ukulihambisa noma ukuhambisa ekamelweni eyodwa kuya kwenye.
2. Amandla kanye izinga yasibamba izinyawo ebhodini. Uma sikhuluma tesakhiwo, ibhodi ayina kufanele uzinze, okungcono imilenze ububanzi ngaphandle. Lapho ekhetha, qaphela futhi siqaphelisise indlela ukulungisa imilenze ebhodini. Nazi izindlela ezingakhona ezifana izipikili, Welding nezikulufi. Izipikili uzame ukugwema, ngoba ekugcineni babe okuxekethile lonke isakhiwo kungenzeka umane igoqe, ngakho lo mshini enokwethenjelwa kakhulu kukhona imishudo ukuthi ungakwazi qinisa uma kunesidingo.
3. Izinhlobo ebusweni amabhodi. Ekuphenduleni umbuzo, nendlela yokukhetha ibhodi ayina kahle ukubheka impahla yokwakhiwa ebusweni ayina. Kunezinhlobo nge plywood enamathela zazo limbozwa ngendwangu ekhethekile. Kungcono yini ukuthatha, ngoba nge isikhathi ngaphansi kwethonya umusi kanye umswakama plywood kungaba zigcwala, futhi ibhodi kuyomelwe bashintshe. Ukukwenza umkhuba kunokwethenjelwa futhi iqine kuyinto surface metal, okuyinto zenziwa lula imbobo ukwakhiwa. Stiffeners, ukufakwa phansi ebhodini ukusiza ulondoloze isimo sakhe ngisho ngesikhathi imithwalo kwetfulwe esindayo.
4. Mshini nenkanuko edlulele. Kufeza indima ebalulekile, ngoba amasondo okuxekethile ayina ibhodi kungaba ngesikhathi okubi kakhulu okwamanje kungenzeka nje ziyaphuma futhi alethe asemrarweni. Ukuze ugweme lokhu, zama ukuthenga model ukuthi has a nenkanuko edlulele isivinini. Ngokungafani bushelelezi isivinini kudivayisi nenkanuko edlulele liye landa amandla, futhi-ke, ungaqiniseka at 100%.
Ngaphezu ulwazi ezincwadini umnikazi ngamunye orientation kangcono izinhlobo zemikhiqizo kufanele ukuyothenga. Kakade, imuphi ibhodi ayina ukukhetha, ngaphandle kokuthi bayibone mathupha? Nakani esikhethekile futhi ukuma sensimbi, okuyinto ayibalulekile induduzo kodwa ukuphepha. Zonke amabhodi yesimanje nazo ifakwe Izitolo elula kanye nezintambo zokunweba, ezithinta obuphelele ezahlukene intambo. Ngakho-ke kuyadingeka ukulinganisa kusengaphambili indawo lapho ibhodi yakho iyokuma futhi kude kangakanani ivela kuye ukuba esitolo esidayisa eliseduze.
Ekuphetheni, thina ngigcizelele elinye iphuzu elibaluleke, ngaphandle lapho impendulo yombuzo othi nendlela yokukhetha ibhodi ayina, ubuyoba ongaphelele. Abanye onobuhle zamanje anemisila ezengeziwe trowel hook iziqobosho izingubo, kodwa abaningi babo azivumelani ngendlela lula njengoba kubonakala efika kuqala. Ngakho-ke kungcono ukugxila izingxenye ezibalulekile ibhodi ayina bese ukhetha okukhethwa kukho esiwusizo kakhulu futhi enokwethenjelwa.
Isibani infrared - ukusetshenziswa, ukulondoloza ukushisa kanye
Elena Biryukova: Filmography Umlingisikazi